Jwxo-shiil, Wuxuu Waday Wali ma Dhicin!! – Rasaasa News
Jwxo-shiil, Wuxuu Waday Wali ma Dhicin!!
Aug 18, 2009 Jwxo-shiil
Jwxo-ba midkii shiilay ee Jaahi naga laalay, Janan buu ahaabaa la yidhi jeerkii uu joogay dariskeene, kolkii uu jihana seegay ee dariskii Jaanqaaday, Jwxo-dan in uu soo dhex galo oos Jaha wareer keeno, Jaahuurbuu galaabay ahayd taad u jixiseen, jinsigeen ma saare naxligan joogso laga waayey, Jiqinjiqis kolkuu idin gashaad kala Jabaysaan, Judba oo karida waa jeenyo gaab aan Jinsigeen jaadna ku lahayne, hadii kale Jabtee waxaad sugtaan Jaamud aan hadhinee.
Waa wax lala dhaka faaro, in dad Yurub jooga oo waliba haysta dhalashooyin Yurub ah, in ay ku kacaan falal la mid ah kuwii ka dhacay Magaalada Stockhom ee dalka Sweden, waxaase la garan la,a yahay dadka gaystay falkan ma waalibaa lagu ogg yahay baan ficilkani, ma maandooriyeyaal bay qaateen, ma horay bay dhiig u galeen oo kiibaa ka soo dhalaalay, waxaa aynu ku eegi doonaa qormada maanta.
Shaki kama joogo in uu Cabdi Iley dambiile yahay oo hadaad CV-giisa akhridid aad oggaan wax uu yahay Cabdi Iley, wuxuuna mudan yahay in meel walba laggag abaal mariyo dambiyada uu galay. Waxaa sidaas si la mid ah ay dadweynaha Somalida Ogadeeniya u xasuustaan Mr.Jwxo-shiil oo wata CV ka liita midka uu wato Cabdi Iley, Cabdi Iley waxaa uu ka shaqeeyaa dalkii uu ku dhashay wuxuuna lee yahay hal waji oo ah Itobiyan, Jwxo-shiil, waa nin calooshiis u shaqayste ah oo dhawrkii sanaba waji cusub ku shaqaysta.
Jwxo-shiil, shaki kama joogo in uu gudaha Ogadeeniya ku dilay dadweyne badan oo shacab iyo xubno Jabhadeedba leh, waxaa intaas dheer in uu si qarsoon u laayeye masuuliyiin Jabhadeed oo wax wayn u soo qabtay ummada Ogadeeniya. Jwxo-shii, waxaa uu handadaad joogta ku hayaa dadka sheega khaladkiisa iyo dhibaatooyinka uu ummada ku hayo, waxaa uu sameeyaa si la mid ah sida uu sameeyo Cabdi Iley, oo ah in ehelada dadka isaga ka soo horjeeda uu ku laayo Ogadeeniya oo markhaati cad loo hayo.
Ummada Somalida Ogadeeniya inta ay ka cabsato Jwxo-shiil iyo ciidan beeleedka qaaraanka qurba joogta lagu hubeeyey, waxay aad uga badan tahay inta ay ka cabsadaan Cabdi Iley, waana arin dhab. Arintaas oo aad ku rumaysan kartaan fal dambiyeedkii ka dhacay Stockhom, Sweden, ee dhaawaca xun loogu geystay Maxamed Shiil Kabadhe, oo Isbitaal ugu jira dhaawacyo ay u gaysteen Jwxo-shiilada [samamtar soo kaca].
Waxaan in badan sheegnay in Jwxo-shiil, dad badan oo wax ma garato ah ayuu maskax badal ku sameeyey [brain wash], isaga oo isticmaalaya kutubta Shuuciyada ee qaybi oo xukun [iska horkeenka]. Wuxuuna samaytay dad uu siduu doono ka yeelo, wuxuu kula hadlaa hal telefoon, wuxuuna u sheegaa in ay fuliyaan fal damibiyeed, wayna fulin iyaga oo aan ka fikirin, wax ku dhici kara lafahooda. Waana arin uu horeba ugu dilay masuuliyiin badan oo N/hurayaal ahaa kuwa uu ku dilayna waxay ahaayeen saaxiibadoodii halganka, oo aan ka fikiri karin ama isweydiin karin maxaan u dilaynaa.
Maxamed Sahal Shiil, in maanta dad uu Jwxo-shiil sumeeyey ay badhtamaha Yurub ku dilaan iyada oo duhur cad ah, goob sawirada dambiyada duuba ay gees walba kaga dhagan yihiin, dadka u badheedhay ee ayna waayo aragnimo la,aan iyo aqoon daro midina haynin, waxaan filayaa in cid waliba ay garan karto waxa haysta. Waxaase wanaagsanaan lahayd in dadka noocaas ah ee badalani ay ficiladooda danbiga ah ayna kula kacin dadweynaha Somalida Ogadeeniya ee ay kula kacaan kuwa wax inaga dhexeeyo waa ciidamada gumaysiga Itobiya.
Dadweynaha Somalida Ogadeeniya, waxay ka midaysan yihiin in xukuumada Itobiya iyo dadkeena oo u adeega ay dhibaato u gaysteen dadweynaha, taas looma minayn karo in ruux walba oo jooga ama ka shaqeeya Ogadeeniya una shaqeeya Itobiya in uu yahay dambiile, dadka arinkaas aaminsana way khaldan yihiin, cadowna uma ah Itobiya ee waxay cadow u yihiin dadweynaha Somalida Ogadeeniya. Dadka fikirkan khaldan aaminsan waa dadka khaldan ee uu Jwxo-shiil, sida khaldan uga faa,iidaysanayo, waa dad aan waligood arag Ogadeeniya, waa dad aaminsan in dadka xabashiga ku hadlaa ay yihiin kuwa lala dagaalamayo.
Hadii, ayna ummada Somalida Ogadeeniya dagdag isugu imanin oo ayna ka tashan, Jwxo-shiil iyo kuwa la socda, waxaa xaqiiq ah in xumaanta maanta jirtaa ay laban laabmi, waxa gacmahooda isku dilaana ay noqon doonaan dadweynaha Somalida Ogadeeniya.
Waxaa dadweynaha qurbo joogta ah la gudboon in ay dagaal dhaqaale iyo mid af ku soo rogaan kooxda Jwxo-shiil, hiil iyo hoona u fidiyaan hogaanka GS-Jwxo, si looga baxo khilaafka baahay iyo xumaanta ururka ONLF ay gaadhsiiyeen kooxda-Jwxo-shiil.
Eray bixinta qormadan
Shiil – waa magac macnihiisuna yahay madow [dhadax shiileedka oo aad ugu badan Ogaden ayaa loogu magac daraa dadka loo bixiyo]
Jwo-shiil – [Maxamed Cumar Cismaan] waa sifeeye kolka uu magac dabayaalo, waana wax xun oo wuxuu wax ka sheegayaa waxa uu ku sameeyey magaca ka horeeya. Jwxo-shiil – waxaa weeye kii baabi,iyey Jabhada wadaniga Xoreynta Ogadeeniya oo ah [Maxamed Cumar Cismaan].
Socdaalka Ina Iley oo si xoogleh u Mideeyey Jaaliyado Iska Soo Horjeeday